Visitor is reading Classic Late Crown Prince Dipendra's Video..
Visitor from US is reading Old Nepal Documentary by Tony Hagen
Visitor is reading think ofaperson - this will read your mind!
PMO Nepal NoInfo Press Changes McBookNepAL
Posted on 11-11-18 2:54 PM Reply [Subscribe]
लामो समय पछि आइतबार बसेको मन्त्रीपरिष्दको निर्णय सार्वजनिक भएन । सधैजसो निर्णय कुरेर बसेका पत्रकारलाई सरकारका संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कुनै निर्णय सुनाएनन् । बास्कोटाले बैठक सकेर निस्किएपछि पत्रकारलाई भने,‘आजका लागि यतिनै ।’
तीन राजदुत सिफारिस
ओली सरकारले मन्त्रिपरिष्दलाई ‘हाइ टेक’ बनाउने भन्दै सबै मन्त्रीलाई ‘म्याक बुक’ बढेको छ । म्याक बुक लिएर बसिरहेको मन्त्रिपरिष्दको फोटो सार्वजनिक भएपछि खानेपानी मन्त्री विना मगरको चर्चा धेरै भएको थियो । जसमा मगरले म्याक बुक अननै नगरी केहि टाइप गरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो । ल्यापटप त्यो पनि महंगोमा पर्ने मध्येको राखेपछि सरकारको केहि विरोध पनि भयो । तर विस्तारै यो विषय सेलायो ।